Kutheni thina - AlorAir
Kutheni Ufuna Dehumidifier?
Intuthuko kwezobuchwepheshe kuphela phambili uluntu, kodwa ukukhulisa ulwazi lwethu yesondlo. Oku kuthetha ukuba dehumidifier eliphezulu ukusebenza unako ukunceda abantu dehumidification zezulu, kwakunye ukunciphisa iindleko zolondolozo elizayo. Ngokomzekelo, ukufuma excess kungakhokelela kumonakalo kwayona isakhiwo kunye namacandelo kwisakhiwo.
ukufuma ngokugqithiseleyo kwenzeka kwindawo emsebenzini okanye ophilayo lomntu. Nangona ngaphambili ekwakucingwa ukuba kwizimanga zendalo, ngoku siyazi ukuba sinako ukuthintela iziphumo ezinobungozi ukufuma kwemfuneko.
► Ngaba sokufuma ngokugqithiseleyo Phi?
Kuxhomekeka izinga lokubanda, umoya ukubamba isixa esithile yamanzi urhulumente anomoya. Xa umoya buyehla, ukukwazi layo ukubamba amanzi kunciphisa ngokufanelekileyo. Oku kuthetha ukuba umoya ukhupha ukufuma abangaphezu kwemfuneko kumphezulu ebandayo, nto leyo idala ngamathontsi kunye amafu thina bayawazi.
► Kutheni Khetha Dehumidifiers for abadlulileyo Ukufuma?
izakhiwo zomthi kalula nokuvunda kwaye ezibolileyo. Phezu ngumngundo ixesha kunye nokubola kungakhokelela imiba, efana imigangatho ugwenxeke izakhelo ucango olungalinganiyo.
15% ye ukulungiswa iinxalenye ziinkuni zibangelwa rot nokuvunda. Oku kukhokelela malunga 20 bhiliyoni iinyawo ngamaplanga ichithwa, nto leyo ngaphezu koko zokutshiswa ngumlilo.
iindonga yangaphandle lula ukufunxa ukufuma kwi indawo zazo. Xa ubushushu kunciphisa ngakumbi, amanzi olongezelelweyo ako, ekhokelela umjikelo umonakalo.
Dehumidifier uya luthathe ukufuma ngokugqithiseleyo kokusingqongileyo nokunceda ukugcina izinto kwinqanaba ukufuma efanelekileyo. Oku kunceda ekunciphiseni iindleko yesondlo kwaye ugcine umonakalo sokubumbela kwi ubuncinane.
Nokumelana metal kaninzi kwenzeka ngenxa ukufuma kwemfuneko. Household izixhobo zombane kunye namacandelo zombane ayikwazi ukusebenza ukuba ukufunxa ukufuma kakhulu emoyeni. Ukutya, amayeza, iincwadi, neempahla nabo basemngciphekweni ukonakalisa kwaye babe wulahle ukusuka ngamathontsi.
Dehumidifier uyakwazi ukubonelela ngesisombululo ezibanzi zonke iingxaki zenu. Ukusebenzisa i, wenza ukudla AlorAir dehumidifiers kakuhle kuqinisekisa ukuba zonke izinto zenu banyamekelwa ngokufanelekileyo.
* Pest uhlaselo
indawo afumileyo enomtsalane kakhulu izinambuzane, ezifana iintubi, iimbovane, namaphela, badla ekhayeni lakho ababanjwa ixesha elide. Ezi uhlaselo lwezinambuzane inokubangela umonakalo omkhulu ekhayeni lakho kunye nempilo.
Dehumidifier kungaba lula ukugcina inqanaba ukufuma entofontofo ohlala kuyo nendawo yomsebenzi. Xa umntu esasaza umoya owomileyo kwaye ukhululekile, uyakwazi ukunciphisa izinambuzane ziintshulube kwaye kuphuculwe umgangatho womoya.
Wasendlini Amanqanaba ukufuma isalamane ka-60% okanye ngaphezulu kuyandisa kakhulu amathuba ngumngundo, nexoshomba, kunye nomngundo, athanda phezu kweenkuni, ubumdaka, ikhadibhodi, nephepha.
Njengoko kwanda ukungunda, athi loo nto ukhupha izigidi yimbewu emoyeni. Oku kukhokelela amavumba lokuvunda, kwaye mnandi, ukongeza ukwandisa umngcipheko iimeko eziyingozi zempilo.
A dehumidifier nga ngempumelelo ukunciphisa ukufuma ngaphakathi, yenza bume yakho ekhululeke kakhulu, nokunciphisa amathuba kwezifo.
We Love ukuqalisa!
AlorAir inika uthotho kwezisombululo eziphambili IAQ kunye dehumidification ngokusebenzisa dehumidifiers, bafaki umoya, scrubbers umoya, yaye kakhulu ngakumbi. iimveliso zethu ezintsha ingasetyenziswa kwizicelo ezininzi ukusuka lezoshishino zokuhlala. Injongo yethu kukuba basoloko innovating kwi imveliso ukubonelela kubathengi bethu.
► okuzingela Advanced Yenza COP High
Jiko on AlorAir dehumidifiers inkulu kune nocingo a dehumidifier oluqhelekileyo. Ukongezelela, i-coil kunye noyilo fin kuquka iimpawu ezizodwa ayikwazi zifumaneka, dehumidifiers ngobuninzi wavelisa enganeno. I oversized coil nobushushu umzimba Ungasusa amaxesha 2-3 njengoko ukufuma kakhulu kilowatt ngamnye nje dehumidifier oluqhelekileyo. dehumidifier kakhul AlorAir kaThixo konga ukuya $ 250 ngonyaka ngamnye iindleko zamandla kwaye ngokuqhelekileyo uya kuthabatha iminyaka 10+ kunye Isiqinisekiso nyaka emihlanu.
► epoxy Powder Ukwaleka on okuzingela
Ukunqanda Freon ukuvuza, isiphako ebulalayo ukuba dehumidifier, AlorAir iye yaqalisa epoxy camera jiko. Olu phawu ezintsha usinika ubomi jiko ngokubonelela zokuzikhusela bume bako nokugcina ukutshintsheka ubushushu coil ngayo. Ngaphezu koko, ukusebenza eliphezulu isiguquli rotary kuqinisekisa ukusebenza ezipheleleyo ngeendleko eziphantsi kakhulu.
► Duty Heavy Pumps Condensate
Iimpompo basoloko imiba ezinkulu ezifana nobushushu, ukusilela bangabonwa, kunye ukurusa. Ngethamsanqa, iinjineli bethu baye nempompo ukuba linokuthenjwa kakhulu ngakumbi. Nge 20 eqhele wokuthwala, impompo condensate kukunika inkululeko some naphi na.
Zonke iingcingo on pump condensate AlorAir olunawo iiplagi kuxhulumano ngokukhawuleza. Oku kwenza yokufaka kunye nolondolozo fast and kulula.
► yoFikelelo oluKhawulezayo ukuze lokuziKhethela zangaphakathi
Zonke dehumidifiers AlorAir zinika ukufikelela lula amacandelo zangaphakathi. I-Storm Series inalo cover unefoni ngelixa Sentinel Series lixhotyiswe ngemivalo ukufikelela. Ukongeza, i impompo uye iintambo kuxhulumano ngokukhawuleza, ngoko ke lula asuswe ngaphandle zokufikelela ibhodi yolawulo.
humidistat wethu kude kwenza AlorAir dehumidifiers ukhetho efanelekileyo, xa iyunithi iza zibanjwa kwelinye igumbi. Le humidistat kwakhona mpawu bile enyusiweyo flanges ungayikhetha, leyo ukunciphisa ixesha ufakelo xa nkqubo umbhobho.
► woluvo ne Dlula Air Design
Zonke dehumidifiers AlorAir ziquka zincwadi Womenzi ukufuma kunye Dlula Air Design, nto leyo ethintela ibhayisekile elifutshane. Abenzi boluvo lula kuchaphazeleka kukurhala lwangaphakathi kunye ukufuma, okwenza ukuba sinotyekelo kokufumana imiqondiso ephosakeleyo ukuba amandla okanye off. Kwelinye icala, oku shortens kubomi bonke isiguquli kwaye yenza inkqubo refrigerant ezingazinzanga. Ukuphelisa lo mba, i Dlula Air Design ivumela woluvo ukuba zigqunyiwe ngokupheleleyo ubushushu lwangaphakathi kunye nokufuma.
► sahlulwa Performance Board Main
Ibhodi engundoqo nga kakhulu kunokuchaphazela ukusebenza dehumidifier yakho. Ngenxa yoku, zonke iibhodi beesekethe AlorAir ukuba kugalelwe ukhuselo. Ibhodi bubungqina siphazamise kwaye ukumelana magnetization. Iinxalenye nokusebenza beplanga inye 100% kuvavanywa.
► Ductable Unit Kwenza Ubomi Bakho Easier
I AlorAir intsapho dehumidifiers inikeza izincedisi kwiintlobo ezibanzi izicelo. Iikhithi bile kuvumela iiyunithi ukuze sibekwe kwindawo ekude, ezifana igumbi ngoomatshini, ize ilawulwe ukusuka kwelinye igumbi ekhaya. Kwezinye izicelo, a humidistat ekude lunokuba yimfuneko.
Njani AlorAir Gcina Imali?
Ukulawula amanqanaba ukufuma ekhayeni lakho ngundoqo ekukhuseleni ikhaya lakho, impilo, kunye nosapho. An dehumidifier AlorAir yi isisombululo esinokuthwaleka iingxaki zakho ukufuma. Olu tyalo-mali wokuqala kumgangatho ophezulu lomoya lwasezindlwini inokubuyiselwa emva kweminyaka embalwa konga umbane.
Le COP aphezulu dehumidifiers AlorAir nga kungakongela ukuya ku $ 250 iindleko zamandla kuthelekiswa dehumidifiers eziqhelekileyo. An dehumidifier AlorAir uya zihlala iminyaka 10 kwaye iza waranti oluncinane nyaka emihlanu. Leyo yolondolozo ekujongwe ezenziweyo ukusuka ukunciphisa iindleko umoya. Emva kokuba uyakwazi ukugcina ukufuma engqinelanayo isalamane ka-50% okanye ngaphantsi, HVAC yakho ayiyi kufuneka sisebenze nzima ukuze ugcine lobushushu obutofotofo.
utyalo-mali lwakho ngendlela dehumidifier AlorAir iza kubonelela nje kuphela imali amandla kodwa, siza kudala indawo yokuhlala ngakumbi ekhululekile yaye isempilweni.
New Uzit Re-sokuhanjiswa
Izixhobo izikhwebu AlorAir ukuze sokubuyiselwa nokucocwa:
Ukufumana isisombululo kakuhle nokuba lukhuni ziyabhidisa ukuba abathengi abangenamava. AlorAir iphuhlise Upakisho Ukubuyiselwa multiple ukuba:
2. Speed ​​kususwe
3. Gawulani intlawulo yesondlo-konogumbe